Muma1980s, nyika zhinji pasi rose dzakatanga kuisa mapaipi esimbi pombi kune iyo dhizaini painogadzira UHV mitsara yekufambisa. Simbi chubhu shongwe nemapombi esimbi sezvo chinhu chikuru chakaonekwa. MuJapan, simbi chubhu shongwe dzinenge dzinoshandiswa mune 1000kV UHV mitsara uye shongwe. Ivo vane rakanyatso tsvagisa pane dhizaini tekinoroji yesimbi pombi matanda.
Kutora pane ruzivo rwekunze, mapaipi esimbi epombi ave achishandiswa mu500kV Double Circuit Tower uye ina redunhu shongwe pane imwechete shongwe muChina, iyo inoratidza kushanda kwayo kwakanaka uye kubatsirwa. Nekuda kwekuomarara kwayo kwechikamu chikuru, yakanaka yekuchinjika-chikamu kushushikana hunhu, kushushikana kuri nyore, kutaridzika kwakanaka uye zvimwe zvakanaka zvakanakira, simbi chubhu shongwe dhizaini yakagadziriswa zvakanaka mumatanho emagetsi akasiyana. Kunyanya, inowanzo shandiswa mune yakakura span chimiro uye shongwe dhizaini yemaguta emagetsi gridhi.
Nekuenderera mberi kwekuvandudza kweChina simbi yesimbi, kugadzirwa kwesimbi-yakasimba simbi haichanetsi. Hunhu hwesimba-rakasimba simbi simbi muChina yakagadziridzwa nekukurumidza uye zvakadzikama, uye chiteshi chekugovera chave chichiwedzera kutsetseka, icho chinopa mukana wekushandisa yakasimba-simbi simbi mukutakura tambo tambo. Mune yekutanga purojekiti yekutsvagisa ye750 kV yekufambisa mutsara, iyo Electric Power Kuvaka Research Institute yehurumende simba mubatanidzwa yakadzidza kubatana kubatana chimiro, chinhu dhizaini paramende kukosha, kuenzanirana mabhaudhi uye hupfumi mabhenefiti ayo achasangana mukushandiswa kwesimba-yakasimba simbi . Inofungidzirwa kuti simbi-yakasimba simbi yakazadzisa zvizere mamiriro ekushandisa mushongwe kubva kune tekinoroji uye kunyorera, uye kushandiswa kwesimbi yakasimba-simba kunogona kuderedzwa Kurema kweshongwe iri 10% - 20%.
Pashure: 2018 Yakanaka Yemhando Yemhepo Shongwe - Magetsi kona kona yesimbi - Qiangli
Electric angle simbi shongwe Angle simbi shongwe iplate yekoramu ine downcomer. Iyo nzvimbo inobvongodza inoumbwa nesimbi yesimbi yakaenzana neumwe neumwe, uye gadziriro yekurongedzwa kwekona simbi inoenderana nekutungamira kwekuyerera kwemvura. Iwo unopinza mupendero wekona simbi iri muchikamu chezasi, uye chikamu chemuchinjikwa chiri muchimiro che "V". Iko kune imwe gidhi giya pakati pemaviri akapindirana nemakona emakona. Iye anodonha akafanana neyakajairika tireyi. Urume i ...
Tube Simbi Sisitimu, Kanzuru yeKutaurirana kweMasipare, Magetsi Angle Simbi Shongwe, Prefab Simbi Zvivakwa, Magetsi Angle Simbi Towers, Angle Simbi Simba Rinofambisa Shongwe,